Maxaad ka taqaan xannuunka Rubella? Yaa halis u ah inuu Qaado? Sidee loola Tacaalaa? | Somaliland Post
Home Caafimaad Maxaad ka taqaan xannuunka Rubella? Yaa halis u ah inuu Qaado? Sidee...
Rubella (oo loogu yeedho German measles ama Jadeecada Jarmalka) waa caabuq Jeermis-side keeno si aad ahna waa la isu qaadsiiyaa wuxuuna ku badan yahay carruurta wuxuuna kaloo ku dhacaa waayeelka. Waxaa dhici karta in aanu lahayn wax calaamad ah ama yeesho qandho sahlan, barar canija ah, xannuun isgoysyada ah iyo furuuruc wajiga ah kaas oo qaata laba ilaa saddex maalmood. Ka doorsashadu badanaa waa degdeg wayna dhamaataa.
Rubelluhu wuxuu ugu khatarsan yahay 20ka asbuuc ee ugu horreeya uurka. Waxay keeni kartaa in ilmuhu dhasho isagoo indha la’ wadnaha cilad ka qaba, ama leh iin garashada ah. Xaalladaas waxaa loogu yeeraa Congenital Rubella Syndrome (CRS).
Qof waliba waa qaadi karaa haddii aan cudurku horay ugu dhicin, aan la talaalin, ama sabab darteed qofku aanu yeellan difaac adag. Badanaa talaalku wuxuu bixiyaa difaac laakiin 5 ilaa 10% kuwa talaalan ayaa qaadi kara rubellaha sababtoo ah ma aanay yeellan difaac adag oo ku filan jidhka.
Dhiiga oo la iska qaado KA HOR uurka aad ayuu muhiim ugu yahay si loo eego in qofka dumarka ahi leeyahay difaac kaamila ee rubellaha. Haddii difaacu hooseeyo ama aanu jirinba, Waa in talaalka MMR ama Rubellaha lagu celiyaa. Dhiig kale ayaa la qaadaa 6 – 8 asbuuc ka dib si loo xaqiijiyo in talaalkii sameeyey difaac adag.
Xasaasiyada – Dhibaha